Home Wararka Gabar Soomaali ah oo xubin ka noqotay baarlamaanka Norway
Gabar Soomaali ah oo xubin ka noqotay baarlamaanka Norway
Gabar asalkeeda Soomaali yahay ayaa noqotay qofkii ugu horeeyey oo soogalooti Afrikaan ah oo kamid noqda baarlamanka dalka Norway.
Marayn Cabdi Xuseen ayaa sheegtay in ay siyaasadda u gashay duruufo haysta bulshada Soomaaliyeed, ee ku nool Norway, kuwaasoo ay dooneyso inay caawiso.
Waxay xustay inay rumaysan tahay in ay wax ka qaban karto dhibaatooyinka, hadii ay haatan ku guulaysatay inay ku biirto baarlamaanka.
Maryan ayaa u mahadcelisay dhamaan dadka codkooda siiyey, oo aanay Soomaali oo keliya ahayn.
Tani waxay kamid tahay guulaha ay dadka Soomaalida qurbaha ku nool ay ka gaarayaan dhanka siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin, iyadoo ay soo badanayaan dadka xilalka qabanaya.
Mareykanka, Canada, Finland, Norway iyo dalal kale oo badan ayay Soomaalida Xildhibaanno ka noqdeen, iyadoo Wasiirka Socdaalka Canda uu mar dhaw ka degay Nin Soomaali ah, Axmed Xasan.
Ilhaan Cumar ayaa waxay kamid tahay baarlamaanka waddanka ugu awoodda badan Caalamka ee Mareykanka oo ay mar labaad loo doortay kursiga Congress-ka.